Wararkii Ugu Dambeeyay ee dhaawacyadii la geeyay Sudan & Isbitaalkii la geeyay oo… | Baled Weyn Media Center
Wararkii Ugu Dambeeyay ee dhaawacyadii la geeyay Sudan & Isbitaalkii la geeyay oo…
Waxay faah faahin ka soo baxeysaa dhaawacyadii ugu horeeyay ee Dowladda Qatar ka qaaday Magaalada Muqdisho, ayna gaysay Magaalada Khartoum ee Xarunta Sudan, si daryeel caafimaad loogu fidiyo.
Dhaawacyadan, ayaa Talaadadii Magaalada Muqdisho looga qaaday diyaarad ay leedahay Qatar, iyadoona ay Qatar xilligaa sheegtay in dadkaasi daryeel caafimaad loogu fidin doono Magaalada Khartoum.
Dadkan oo qaarkood qaba dhaawacyo culus, ayaa waxay Magaalada Khartoum soo gaareen gelinkii dambe ee Talaadadii, iyadoo ay diyaarad militari ka dejisay garoon ay leeyihiin Ciidamada Sudan.
Caqabadda 1aad waxay soo wajahday, ka dib markii diblomaasiyiinta Somaliyeed ee ka hawlgala Safaaradda Somalida ee Magaalada Khartoum laga horjoogsaday inay gudaha u galaan garoonkaasi. Caqabadda 2aad waxay dadkani ku timid, markii la geeyay isbitaal aan ahayn midkii la fillaayay in lagu daryeeli doono.
Asad Cabdi Mukhtaar oo ka mid ah ardayda Somaliyeed ee wax ka barata Caasimadda Khartoum, ayaa sheegay in isbitaalka hadda dhaawacyada la dhigay aanu lahayn adeeg caafimaad oo dhameystiran.
Asad Cabdi oo la hadlay Idaacadda Mustaqbal, ayaa tilmaamay in ardayda Somaliyeed ay dhexda u xirteen, sidii ay gacan ugu fidin lahaayen dhibane-yaasha, maadaama aanay weli helin daryeelkii ay u baahnaayen.
Dhanka kale waxaa caawa soo baxaya warar sheegaya in qaar ka mid ah bukaanada laga saaray isbitaalkii ay xalay ku hoydeen, iyadoona loo kala qaybiyay isbitaalada Khartoum ku yaala qaarkood.
Gelinkii dambe ee maanta, ayaa waxaa Magaalada Khartoum gaartay diyaarad kale oo 59 bukaan ka soo qaaday Magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah bukaanada, ayaa la sheegay in uu geeriyooday, ka hor intii aanay diyaaraddu soo gaarin Khartoum.
Warar aan la xaqiijin, ayaa sheegaya in Ra’iisal Wasaare Kuxigeenka Somaliya, Mahdi Maxamed Guuled (Khadar) uu Khamiista berrito taggi doono Magaalada Khartoum